Nnukwu oghere eriri afọ Manufacturers & Suppliers - China Nnukwu oghere eriri afọ Factory
Uzo N'èzí Sports Water Bag
Akpa mmiri ahaziri iche maka egwuregwu. A na-eguzogide nrụgide ma na-eguzogide ọgwụ, ike na mgbawa. Ihe ndi eji eme ka ihe di nma na gburugburu ebe obibi agafewo otutu nyocha na asambodo di nma. Can nwere ike hazie nkọwa na ihe ndị ị chọrọ, na dakọtara ọkacha mmasị gị ngwa. Na-enye gị ohere ịmejupụta mmiri mgbe ị na-agba ịnyịnya, Nyere gị aka ịka mma na nzọ ụkwụ na-agba ọsọ.
N'èzí Water Nchekwa eriri afo
Nke a bụ akpa mmiri a haziri nke ọma nwere nnukwu oghere. Ọhụrụ acha anụnụ anụnụ na-ewetara gị ahụmịhe ọhụụ dị iche. N'ezie, enwere ike ịhazi ya dịka ogo ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ, dị ka TPU, EVA, PEVA. Designdị pụrụ iche nke ihe mkpuchi uzuzu nozulu nwere ike izere nchịkọta ájá. Adabara niile iche iche nke n'èzí-eme. Kwe ka ịtọhapụ onwe gị kpamkpam n'èzí ma bịaruo okike nso.
Nnukwu oghere mmiri n'èzí
Akpa mmiri egwuregwu n'èzí nwere nnukwu oghere dị mfe maka nhicha na njuputa. Ihe ndị a na-eme ka gburugburu ebe obibi dị elu nwere ike iguzogide okpomọkụ site na mwepu 20 ogo na ogo 50 dị mma, ma nwee ike imeghari na gburugburu ebe dị oke egwu. Jupụta na mmiri mmiri maka gị n'oge dị oké egwu. Bụrụ onye enyemaka kachasị mma n'èzí.